Muhiimadda Words — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Words waa muhiim. Waxaan u isticmaalaan erayada asxaabta iyo qoyska xiriiro. Waxaan u isticmaali hadalkayaga si ay u qabtaan ganacsi. Waxaan u isticmaalaan erayada si wada saaray heeso iyo nolol a. Waxaan u isticmaalaan erayada carruurteenna edbin. Siyaasiyiinta isticmaalaan erayada in aad ka dhaadhiciyo in ay tahay musharaxa ugu wanaagsan ee shaqada. Words waa qayb weyn oo ka mid ah dhinac kasta oo nolosheenna. Waxaan leeyahay wiil cusub. Waa adag tahay in qof toddoba toddobaad jir ku nool, inta badan maxaa yeelay, ma la hadli kartaa. Sidaas mararka qaar, waxaan doonayaa in aan isaga caawin laakiin ma yaqaanaan sida sababtoo ah waxa uu erayo aan xiriiri kartaa weli. Waa adag tahay in la qiyaaso adduunka oo aan erayadayda.
Qofka celcelis ahaan ayaa sheegay in ku saabsan 16,000 erayada maalin. Taasi 112,000 erayada todobaad kasta. Taasi waa in ka badan shan milyan oo erayada sanad kasta. Waxaan u isticmaalaan erayada. Dad badan oo.
Oo wax kasta oo ay jiraan wax badan oo uu bilaabo inuu la qiimo tiro. Qiimaha wax isbeddelllada ku salaysan sida badan waxaa ka mid ah, waxaa jira. Marka ay jiraan 100 cookies miis ka dib markii adeeg aad sii yaabaa in hadalka in muddo ah. Laakiin marka ay jiraan cookies wax yar uun, waxay u muuqdaan kuwo qaali ah. Waxaad malaha degdegin doonaa halkaas oo haddii aad hesho mid ka mid ah waqtiga, qaniinyada in badan oo macaan. Maxaa yeelay, waxaannu maqalnay oo ay isticmaalaan erayo badan oo maalin kasta ay macnaheedu ma wax badan noo. Laakiin waxaan iyaga u arkaan qaali ah.
Waxaa laga yaabaa in aan u malaynayaa in kaliya wax run ahaantii muhiim ah oo aannu ku odhan waa weyn. Waxaa laga yaabaa in aan u malaynayaa in kaliya waxa aan hoos ku qor, ama kaliya marka waxaan leenahay sheekaysiga groundbreaking ama kaliya marka aynu nidhaahno waxa aan dhab ahaan u malaynayaa waa muhiim hadalkayaga. Waxaan qabaa in caawa aayadda our la xidhiidhaa wax aad u kala duwan. Noqda ii raacaysaa Matthew 12:36.
Laakiin waxaan idinku leeyahay, nin yeelan doonaan in ay siin account on Maalinta Qiyaame, waayo, Eray kasta oo si taxadar la'aan ay ku hadleen. (Matthew 12:36)
Ciise hadalladan oo ku dhex jira wada hadal ah la Farrisiinta ah ayaa sheegay in, ka dib markii ay ku ashtakeeyaan of jinniyo ku saaraya, Shayddaan. Oo sidaas daraaddeed Ciise asal ahaan u sheegaysaa in ay xun tahay, oo aan wax wanaagsan dhihi karaa (waxa uu leeyahay hab nooc hadallo a). Oo isna wuxuu iyagii u sheegay in dhammaan hadalkayaga yihiin midhaha waxa xidid qalbiyadeenna.
Markaasuu wuxuu dhibciyo qarax na on. Taasi waxay keeni doonaan in eray kasta oo si taxadar la'aan aynu ka hadalno si ay uga jawaabaan oo ay Ilaah u. Taasi ma khuseyso oo kaliya Farrisiintii. Waa run, waayo, hal kasta oo naga mid ah. Oo Aayaddan soo socota waa ka sii cabsi. Waxa uu sheegay in, "Waayo, hadalladaada ayaa lagugu waayay doonaa, oo hadalladaada ayaa lagugu xukumi doonaa. " Laakiin sababta? Maxaad hadalkayaga waa mid aad muhiim u? Waa maxay sababta aan loo waayay doonaa ama cambaareeyay ku salaysan wax yar awgood sida erayada aynu nidhaahno?
Wuxuu ka dhigaa in si cad hore markii uu sheegay in, "Out of buuxdhaafo iyadu ee wadnaha afkiisu wuxuu ku hadlaa." Weligaa ma dareemay cadaalad xukumay? qof aad qabto Like maalin xun marka aad ahaayeen waalan iyo in maalin maalmaha ka mid xukumo qof oo idil? Well lagu xukumo by hadalkayaga ma aha sida in. Waxa aan jeclaan erayada yihiin kaliya hal dhinac oo ka mid ah qof aan na qeexo. Waxaan la xukumi karaa sax ah by hadalkayaga waayo, iyagu waa milicsiga sax ah waxa ka dhacaya ee qalbigayaga.
Waa ku dhowaad sida aan haysta koob, aanad garanayn waxa ku jira. Waxaan idinku leeyahay kartaa biyaha waa in ay jiraan, ama juice waa in ay jiraan. Laakiin haddii aan ku turaanturoon iyo firdhadaan ama soo daataan qaar ka mid ah cabta oo, aad u ogaato sida saxda ah waxa ku jira. Waxaa isku mid ah la hadalkayaga oo qalbigayaga ay. Marka aynu ka hadalno, content ee qalbigayaga waa daadinta baxay. erayada Our mar walba tuso waxa qalbigeenna, ha ahaadeen wanaag ama shar. Oo Paul Tripp, qoraa aan akhriyey Isbuucaan, ayaa sheegay in, "Waxaad erayga dhexdhexaad ah marna kama uusan hadlin in aad noloshaada."
Lagula xisaabtamo Words Our
Kasta oo hadda ka dibna qof aad qabto doonaa cajalad ku leh wax ay marnaba ku odhan lahaa in dadweynaha. Tani waxay dhacday in Madaxweyne Obama markii uu la hadlayay Madaxweynaha Russia. Tani waxay dhacday in Mitt Romney toddobaadkii la soo dhaafay. Oo iyana ma ay filayaan in lagula xisaabtamo erayadaas, laakiin waxa ay ahaayeen. Sidoo kale, waxaan qabaa inaan lama lagula xisaabtamo erayada qaarkood aynu ka hadalno. Waxaan qabaa inaan wax, iyo ku camal falkiisa sameeyey, laakiin waxa ay ku soo noqon doonaan si ay noo qaniini. Waa sida haddii Ilaah waxay leedahay kamarado qarsoon oo dhan abuurka.
Waxaa maalintii - qoraalka waxa ku baaqay in Maalinta Qiyaame - marka aan ka hor Judge quduuska ah ee caalamka oo dhan istaagi doonaa. Oo markii aannu ha hadalkayaga istaagi doonaa sida markhaatiyaal - mid ka markhaati inoo ama inaga gees ah. Caddaymaha loo soo bandhigi doono.
Ilaah eegi doonaa sida aanu u hadlay waalidiinta sidii ilmo iyo qaabka aan u hadlo si isqaba ama madaxda sida dadka waaweyn. Ilaah baari doonaa sida aanu u hadlay shisheeyayaal dariiqyada. Ilaah ayaa baari doona kaftanka aan u sheegay in co-workers our. Ilaah shanlee doonaa figeeyo noo cadhoon in gaadiidka on drive inay ka shaqeeyaan. xitaa uu ugu rogto doonaa iyada oo loo marayo waxa aan ku qortay on Facebook iyo Twitter. Xitaa erayada aan dirayno in fariimaha qoraalka ah ama emails. Eray kasta hal.
Waxaad dareemi Ciise ma odhan waxaannu yeelan doonaan in ay sii xisaabtii erayadii muhiim ah oo aynu ka hadalno. Waxa uu sheegay in, "Eray kasta oo si taxadar la'aan." Erayga loo isticmaalo dayacbuu waxaa sidoo kale lagu turjumay micne lahayn ama aan waxtar lahayn. Eray kasta, iyadoo aan loo eegayn sida aan qiimo lahayn oo aad u maleyso inay tahay. Ilaah wax walba og hadalnay saaka, ogyahay inuu eray walba ee abid na hadlay.
Oo halkan waxa. Just eray keliya kuwa aan cibaadada lahayn waa ku filan oo ay ina eedayn. Waa kuwee ka mid ah hab Dabcan, oo dhan oo naga mid ah waa in la cambaareeyaa for hadalkayaga.
Waa hagaag, waxaa jira saddex erayada, onkodeen by Rabbi Ciise Masiix, in lagu baddelayo Eray kasta oo si taxadar la'aan aan abid hadlay. Kuwa saddex erayada yihiin "Waa. Ma. Dhameyso. "Kadib markii la noolaa nolol kaamil ah, ka dib markii kaliya erayada uu isticmaalay hab in Ilaah ammaanay, Ciise wuxuu u kacay in iskutallaabta. Oo markuu u dhegaysanayay iskutallaabta in, kuwaas wuxuu u yahay dembiyada ka mid ah hadalka ku dhintay. Oo wuxuu kacay intii saddex maalmood ka dib.
Kuwa naga mid ah, kuwaas oo dhigay rumaysadka Masiixa, haa, waxaa jira erayo dhismo aan hadashay in ay yihiin midho ah oo xidhiidh la leh Masiixa. Oo erayadii kuwa marag furi in our Nicmada. Laakiin waxaan weli waa la xukumi lahaa by dhan kale loo dhigo. Markaasaa Ilaah ku ammaanaan in dhiigga Rabbi Ciise daboolayaa erayadaas. Haddii aadan aqoon Ciise, jeedin dembiyadii iyo kalsooni aad mid ka mid ah oo kaliya iska yaa idin cafiyi kara dhamaan dembiyadiinna, oo ay ku jiraan dembiyada ee hadalka.
Sidaas sida Mu'miniinta, in kastoo aannu wax laydinkuma garayn doono hadalkayaga, waxaan doonaa weli la qaban Xisaabtooda. Waxaan weli leeyihiin doonaa iyaga, waayo, si ay uga jawaabaan in Ilaah iyo waxaan waayi kartaa abaal Jannada.
Qaar ka mid ah oo naga mid ah waa mid aad u taxaddar leh lacagtayadii. Waxaan ka dhigi miisaaniyadda, waxaan dheelli kredid our, annagu waan xajinnaa rasiidhada our, oo aynu eegno statements our biilasha online. Maxaa yeelay, waxaan ogahay badan waa at saamiga. Waan ognahay waxaan u leeyihiin in si wanaagsan maysid lacagtayadii.
Well nooc isla feejignaan, iyo xisaabinta waa in la mariyo habka aan u isticmaali hadalkayaga. Maxaa yeelay, wax badan waa at saamiga. Oo waxaannu waayo, mid kasta oo hadalkayaga jawaabi doonaa in Ilaah. Waa in aan wakiillo wanaagsan oo erayada aan u isticmaalno.
erayada Our waa sida dubbayaal. Waxaan dayasho iyaga wiifowga karaan agagaarka iyo jebin alaabtii. Ama waxaan isticmaali kartaa iyaga si taxadar leh u dhisi alaabtii. Sidee waxaad isticmaali doonaa erayadaada Isbuucaan? Sida aynu hadalkayaga isticmaalo isbuucaan ee la soo dhaafay u badan tahay in na tusi doonaa sida loo isticmaalayo waxaa laga yaabaa todobaadkan soo socda, haddii wax isbedel.
Sidaas waxaan doonayaa in aan ku siin saddex dariiqo oo aan si fiican u isticmaali kartaa hadalkayaga.
waxaan. La hadal Ilaah
Of the 16,000 erayada aan u isticmaalno maalin kasta, waxaan noqon lahaa kuwa caqliga leh si ay u isticmaalaan in badan oo kuwa in wada hadalka, isagoo Ilaah la. Ciise wuxuu ina siiyey helaan Aabbaha, oo waa in aynu geesinimo kaga dhex yimaadaan inta badan carshigiisa hor. xaaska Our laga yaabaa in ay dhibaato isagoo dhagaystayaasha wanaagsan, laakiin Ilaah ma aha. Had iyo jeer wuxuu maqlaa annagoo baryadayada. Dhab ahaan, Waxa uu aad u dhow maqlaa.
Inta badan marka waxaan u socoto iyada oo wax adag, waxa ugu horeeya ee aan sameeyo waa kaliya dalool Saaxiibbo ku qoyska. Ama waxaa laga yaabaa waxaan uun canaan u soo baxay oo ku saabsan cod weyn nafteena. Waa maxay qashinka ka mid ah erayada. Just todobaadkii hore, Waxaan la cabanaya inay naagtaydii ku saabsan oo ahayd arrin keliya runtii igu taagnaa oo waxaan ka walaacsan. Oo waxyaalahaas ka hor heshiis ama bixiya talada wax, ayay kaliya si fudud i weydiiyay, "Ma lagu tukanayay oo ku saabsan?"Jawaabtii jirin. Waxaan in la hadlaya Ilaah ku saabsan. Taasi waxa ay noqon lahaayeen isticmaalka fog wanaagsan oo erayadayda.
Inta laga neefin sameeyaa wax ka badan na madder. Waa qashinka ka mid ah erayada mararka qaarkood. Laakiin hadlaya Ilaah ma aha qashinka ah erayada. Ma jiro si fiican loo isticmaalo erayadiinna. Ma tahay in ay gacanta ku, laakiin uu yahay. Sidaas marka aan u baahan tahay caawimo, halkii kaliya isagoo waalan, kaliya waa in aan ka hadlo in Mid ka mid ah, kuwaas oo ay ka masuulka. Oo haddii ay wanaagsan noo iyo Ammaantiisu, Waxa uu na siin doonaa codsigeena.
Qaar ka mid ah oo naga mid ah waxaa laga yaabaa hor imaad. Oo markii aannu ka leeyihiin arrimaha qof, waxaan xaq u tag qofka is ogow waxa of. waa in aan xasuusnaano in hadalka Ilaah ku saabsan xaaladda ay tahay mid aad u muhiim ah oo wax ku ool ah ka hadlayeen in qofka kale. La hadal Ilaah ku saabsan arrimaha aad oo xiriir ah ka hor inta aad la hadashid qofka kale. Isaga Waydiiso caawinaad iyo nimco iyo xigmad. U ogolow miisaanka hadalka si aad wax abuura si aad dhug yeesha, kaa caawiyo in aad si cad u malaynayaa.
Oo annaguna waxaannu waa in kaliya ma hadalkayaga isticmaalaan si ay Ilaah weydiiso alaabtii. Tani waa sababta aan u leeyihiin salaadda ammaanta subax kasta Sunday. kaliya waa waxaan isaga ku ammaani doonaa jeer qaar ka mid ah. Waxaan waa in la soo habab u gaar ah si ay u gabyi tasbiixsadaan. In ka badan oo kaliya, "Isagu wuu wanaagsan yahay. Waad ku mahadsan tahay Ilaah. "qalbigiisu wuxuu la cokan leh jacaylka waayo, Ilaah wuxuu helaa habab cusub iyo sababaha cusub in Ilaah ku ammaanaan waxa maalin kasta. Isagu waa istaahilaa of our ammaantaada.
II. U sheeg injiilka
Uma maleynayo karaa wax wanaagsan inaad u sheegto qof kale, ka injiilka. Ilaah wuxuu ku hadlay maalmihii la soo dhaafay, kuwaas oo loo marayo Wiilkiisa Ciise Masiix ah. Oo waa in aan u sheego dadka kale isaga ku saabsan iyo wixii uu sameeyey.
Romans 10 inoo sheegayaa in, "Rumaysadku wuxuu ka yimaadaa iyada oo maqal iyo maqalka iyada oo hadalka Masiixa." Tani waa sida Ilaah rag iyo dumar badbaadiyay. Markii ay maqlaan Injiil iyo waxa heli by iimaanka.
Waxaan rabnaa in aad fikir in mudo ah oo ku saabsan waxa qofka aad nolosha u baahan yahay in la maqlo Injiil. Ma xubin ka tirsan qoyska, jaalle ah, deris, rayiislaha, dhakhtar? Waa maxay qofka aad nolosha u baahan yahay in la maqlo Injiil?
Waa inoo wanaagsan inaynu hadalkayaga in ay isticmaalaan si ay u dhisaan xiriir iyo dhulka caadi ah ula saaxiibo non-Christian. Waa wax fiican si ay u ogaadaan in aad daryeesho oo iyaga ku saabsan. Laakiin waa xun haddii aan marna dhab agagaarka heli Injiilka iyaga la wadaago. Waxaa la ba'an lahaa haddii aan lahaa 10 wada hadalka oo ku saabsan siyaasadda, laakiin ma aha mid ku saabsan Injiilka. Waxa ay noqon doontaa xun haddii aan lahaa wada hadalka todobaadle ah oo ku saabsan ciyaaraha, laakiin waligood wax sheekada ku saabsan Ciise. Oo aan la hadlayo ku saabsan aniga.
Recently, Waxaan lahaa xubnaha qoyska dhiman. Oo mar alla markii ay taasi dhacdo, waxa ay i xasuusineysaa, in qaar ka mid ah jeer way fiican tahay inaad sugto, laakiin mararka qaar waxaan u baahan tahay inaad u sheegto dadka waawayn oo ku saabsan Ciise hadda. Waan ogahay caasinnimada ma leexiyo kartaa qorshaha Ilaah ee, laakiin in macnaheedu ma aha waxaan noqon waa caasi. Oo si walba, raac hogaaminaya Ruuxa, laakiinse waxaad ogaataa in uu marna nagu keenaysaa in ay ku riday off walax in loo baahan yahay in hadda la sheegay in. U sheeg injiilka.
Tani macnaheedu ma aha in uu noqon our dhexgalka kaliya la non-Nasaara. Laakiin waxa aanu ka dhigan tahay in ay u baahan tahay in ay ka dhacaan. Waxaa laga yaabaa in aan iyaga la kaniisadda oo ay isticmaalaan khudbada sida furitanka ah si loo gashto in uu ka hadlo waxa ku saabsan. Waxaa laga yaabaa in aan u tilmaamo buug wanaagsan ama cd in ka hadlayaa Injiil (ahem, anigaa). Raadi jid u sheegto Injiil.
III. Dhis Up Qaar kale (G- Grace)
Ha u ogolaan kasta oo hadal bilaa ka soo baxay Afkiinna, laakiin kaliya waxa waxtar u dhiso dadka kale sidii ay baahidooda, in laga yaabaa in ay ka faa'iideysan kuwa dhagaysan. (Efesos 4:29)
Taasi waa in ay ahaataa mabda'a Hanuun guud ee hadalkayaga dadka kale. Kaliya waxa waxtar u dhiso dadka kale ilaa. Sida aan horeba u sheegay, hadalkayaga waa sida dubbayaal. Waxaan jebin kartaa walax ama walax dhiso. Waxaana jira tan oo siyaabo dadka kale dhiso.
Ciise ninkaas inoo sheegayaa oo keliya ma kibis ku nool ma off, laakiin eray walba oo soo baxa ee afka Ilaah ka. Ilaah wuxuu ku hadlay erayo qaali ah. Oo waxaannu noqon waa tusayaan kuwa erayo qaali ah midba midka kale fursad kasta oo aan ku heli.
Mid ka mid ah jidkiisu waa dhiirigelin. Waxaan qabaa, inay tahay wax CHBC gaar ah si wanaagsan ayuu falaa. Waxaa run ahaantii aniga iyo xaaskeyga qabtay off ilaalada markii aynu hore u yimid. "Ma waxay igu dhiiri su'aasha waxaan weydiiyay?"Up hoos dhiiri tani waa leeyahay. xaqiijin dadka kale. U sheeg marka aad aragto Cad nimcada Ilaah ee noloshooda. Xaqiijin jacaylka aad iyaga u. Xaqiijin jacaylka Ilaahay iyaga u hayo.
Si kale waxaa u babac midba midka kale. Waa in aynaan qabaa "dhisno" waxaa loola jeedaa mid ah sida cute, erayada sanqadha adkaa. Mararka qaarkood dhiso looks sida canaantaadii, ama la saxo. Mararka qaar waxa ay u muuqataa sida adag leh Walaal ama Walaashiis iyo iyaga oo wacaya in ay toobad keenaan dembiga ah. Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan ka dhigay ballanqaad in midba midka kale in uu sameeyo - si aad ugu socotaan kasta oo kale iyada oo loo marayo jeer wanaagsan iyo jeer u xoqdo.
Oo annaguna waxaannu kugu dhici in la xaq haatan maraya waqti buuqa sida kaniisad. Oo waxaan u baahan nahay dhiirrigelin iyo erayo adag labada. Ku dhiiri geli walaalihiin oo Walaalo ah Injiil. Xusuusi iyaga ka mid ah awoodda Ilaah iyo wanaaggii iyo ballamada uu. Oo weliba doodid walaalihiin oo walaalahoodii gabdhaha si ay ula dagaalamaan dagaal wanaagsan oo iimaanka, si ay u samray in Ciise isku halleeyaa. Waxaan u baahan nahay in.
Hab kale oo aad u dhisi karaan dadka kale ilaa waa by siinaya talada wanaagsan. The go'aan ugu bisil yihiin kuwa aan go'aanno ku go'doon. In la heli karo in la maqlo ku saabsan waxa ka socda in walaalkaa ama walaashaa nolosha. Oo caawiyaan iyaga qabaa iyada oo sida Ilaah u doonaynin inuu iyaga ka jawaabaan. Oo taliyee kitaabiga ah.
Dhinaca mid, sida kaniisad, waxaan samayn shaqo weyn oo isagoo wada hadalka ruuxiga wanaagsan. Dhinaca kale, waxaan waa in aan ka baqin in ay ka hadlaan wax kale oo aan ahayn Ciise. Waxaan ka hadli karaa nolosha, oo waxaan ka hadli karnaa sports, kaliya waxaa ka samaynaysaa jidka ah in Ilaah ammaanaa.
Qaar ka mid ah oo idinka mid ah waxay u baahan yihiin in la joojiyo hadalka badan iyo kuwa kale u baahan tahay si ay u bilaabaan hadalka more. Qaar ka mid ah oo naga mid ah u baahan tahay in dhakhso wax lagu maqlo. Qaar ka mid ah oo naga mid ah marnaba u isticmaalaan erayada wax. Oo waxaan u baahanahay in ka badan samayn. hadal. Ilaah ayaa ka shaqaynaysa in noloshaada iyo waxaan rabnaa in aan maqlo oo ku saabsan. aad erayadan oo dhan ha la gartaa jacaylka. My salaadda waa in CHBC noqon doono kaniisad lagu gartaa erayada jecel.
Sida aad doonaysaan inaad codsato wixii aad maqashay caawa, ma ka dhigi qalad ah ee kaliya isku dayayaan in ay la socdaan waxa aad sheegayso oo kaliya isku dayaya fiican in la sameeyo. kaliya ha qabto oo keliya on baxsan.
Sida aan arki hore ee qoraalka, waxa kaydiyey ee qalbigayaga ku soo baxa. Waa in aynaan u malaynayaa in ay jirto kala fogaanshaha u dhexeeya wadnaha iyo carrabka. Sidaas urursadaa wax wanaagsan in aad wadnaha iyo iyaga oo buux daawado. Oo markii aannu samayn in, halkan waa sida aan waa in la dadaalaya in hadalkayaga u isticmaali.
Habka ugu dhabta ah si ay u daawadaan erayadaada waa in ay daawadaan qalbiyadiinna waayo, sidaas si dhow ay ku xiran yihiin. Waxaa jira line toos ah xagga qalbiga ka carrabka ku. qalbigaaga Watch, iyo adigoo samaynaya in, daawato Words aad. Oo sameeyo oo dhan of this by daawashada Ereyga.
francismewa • November 22, 2014 at 3:10 waxaan ahay • Reply
fiican inaad akhrido oo ku saabsan qiimaha erayada . Waxaan wax fiican ka soo xigtay this , waad ku mahadsan tahay erayada fiican
manicle • February 3, 2015 at 3:43 waxaan ahay • Reply
tani waa mid aad u cabsi badan. haddii qof kasta oo keliya ka akhrisan lahaa, fahmo oo raaco xeerarka, uu adduunka ahaan lahaa meel ka wanaagsan in ay ku noolaadaan.
Smile • October 24, 2015 at 9:22 waxaan ahay • Reply
waxaan isticmaali erayo badan
Tani waxa ay ahayd ku waano waqti ii. La hadalka ku saabsan this caawa aad maado ee waxbarasho bible. Ilaah ku mahadsan tahay i barbaro in aad website oo Ilaah ku mahadsan tahay isticmaalaya aad si ay u sharxaan eraygiisa si cad iyo si fudud u fahamsan yahay.
Ilaah ammaan aad Service!
Words runtii waa muhiim. info Good. Fadlan qaado waqti in ay soo booqdaan my website waayo, Ilaah kaloo i siisay wasaaradda si loo baro dadka kale oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay erayada.
Xusuuso: Erayada yihiin ugu yaraan kala bar xaqiiqada aadanaha haddii aan inta badan ku
Xusuuso: 2016 In Review – My aragnimo Job Ugaarsiga | SharePoint Saamaynta The
Xusuuso: Words – Banana Wifey
Xusuuso: wacdiya / xuska / James 3 / Power of Word The